Coffee – Warmae.com
New Openings Restaurants (March)
, article, Bakery, Bar & Grill, BBQ, Coffee, Hot Pot
ဒီတစ်ပတ်တော့ ရန်ကုန်မြို့မှာ လတ်တလောဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေအကြောင်းကိုစုစည်းဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်မယ့် ဆိုင်သစ်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် သွားလို့ရအောင်ရှာဖွေပေးထားပါတယ်။ အသစ်ဖွင့်လှစ်မယ့် ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံပြီး လက်လှမ်းမီသလောက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
Bakery ဆိုင်ကောင်းကောင်းရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့်ဆိုင်လေးပါ။ ဒီဆိုင်မှာ An-pan, Cream-pan, Meron-pan တွေကလူကြိုက်များပြီး ရွေးချယ်စရာအစုံအလင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Open: 11: 00 am – 17: 00 pm
TEL: 09 250 790 192
ဒီနိုင်ငံမှာ ဟော့ပေါ့ကို ရည်းစားထက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ Foodie တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကဟော့ပေါ့ချစ်သူတွေအတွက် Try ကြည့်ရမယ့်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ။ ကားပါကင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်အပြင်အဆင်နဲ့ အရသာကောင်းတဲ့ ဟော့ပေါ့က ဒီဆိုင်ရဲ့အသက်လို့ဆိုပါတယ်။
Hours 10:00 AM – 11:45 PM
အရင်က ရှင်စောပုလမ်းမှာ စက်ရုပ်ခေါက်ဆွဲလို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဆိုင်ပါ။ ဆိုင်နာမည်နဲ့ နေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးစီချွမ်/မာလာ အရသာဟင်းပွဲတွေ အကင်တွေ၊ လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲနဲ့ ဖက်ထုပ်တွေအစုံရနိုင်တဲ့ဆိုင်ပါ။ အစားအသောက်တွေစုံပြီးဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ဈေးလျှော့ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
09 44373 9029
ဒီဆိုင်ကတော့ Coffee Lover တွေအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ပါ။ မြန်မာ့ကော်ဖီစစ်စစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာချင်တယ်၊ အရသာကို မြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
Hours 8:00 AM – 10:00 PM
Origin Coffee & Roastery at The Central Boulevard, Shop 19, Kabar Aye Pagoda Rd, Yangon
Phone : 09 964 175265
, article, Bar & Grill, Coffee, Myanmar Traditional Foods, Warmae Review
ရာသီဥတုကအရမ်းပူလာပြီး ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ အေးဆေးထိုင်၊အနားယူ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ဆိုင်ကဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးပဲ နေ့လည်နေ့ခင်းဆို အေးဆေးရှိတယ်။
Thai Coffee and Black Tea
ဆိုင်မှာ လိုင်းကောင်းတဲ့ Wifi ရှိတာက အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် သဘောကျစေမယ့်အချက်ပါ။ ရတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းစုံပါတယ်။ Day Time Breakfast အတွက် မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊
Eoropean Breakfast ရနိုင်သလို Appetizer, Salad and Suop မျိုးစုံအပြင် Bistropedia Signatures တွေလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က နေ့လည်ခင်းဖြစ်တာကြောင့် ကျန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုတော့ မစားဖြစ်ခဲ့ဘဲ Black Tea, Thai Tea တို့လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သောက်စရာ Drinks တွေပဲသောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆိုင်အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် အစားအသောက်အတော်လေးစုံလင်တယ်။ ဆိုင်နေရာအနေအထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်၊ ဆေးဆေးထိုင်လို့ရတယ်။ အစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေက ပုံမှန်ထက် ဈေးနည်းနည်းများတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဆိုင်အနေအထားနဲ့အရသာကောင်းကောင်းအစားအသောက်တွေရနိုင်တာကြောင့် မဆိုးဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ စမ်းချောင်းဗဟိုလမ်းပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Bistropedia Bar & Grill က ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။
Phone : 09443355773
SAT-SUN 07:00 – 23:00
, article, BBQ, Coffee, Myanmar Traditional Foods, Shan, Thai, Warmae Review
Seafood နဲ့ ရှမ်းစာကောင်းကောင်းရတဲ့ဆိုင်လေး
ဒီဆိုင်လေးကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှိုလိုပေါက်နေတဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်နာမည်က BEE HOUSE ဖြစ်ပြီးတော့ Seafood နဲ့ ရှမ်းစာကောင်းကောင်းလေးတွေရတဲ့ဆိုင်လေးလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပြီး အစားများကြတဲ့
အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ BBQ ၊ ပင်လယ်စာ၊ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာ၊ ထိုင်းအစားအစာတွေကိုဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာနဲ့ စားနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘီယာသောက်မလားဝိုင်သောက်မလား cafe သောက်မလား ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Drink အမျိုးမျိုးလည်းရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဆိုင်က လူစည်ကားရာနေရာဖြစ်တဲ့ စမ်းချောင်းလမ်း Strategy First ကျောင်းနားက The Corner Barရှေ့နားမှာ ဖြစ်ပြီး စမ်းချောင်းကိုမကြာခဏရောက်ဖြစ်ရင်တော့ ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့
Phone : 09 776 296789
SAT-SUN 9:00 – 20:00
, Article, Bakery, Coffee, Warmae Review
ဒီတစ်ခေါက်မှာ Acacia Tea Salon ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်လေးက အတော်လေးသဘောကျစရာကောင်းပြီး ငြိမ်သက်မှုရှိတာကြောင့် အေးဆေးနေချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်။ အရသာရှိတဲ့ ကိတ်မျိုးစုံနဲ့လက်ဖက်ခြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်တွေရနိုင်ပါတယ်။
လဘက်ခြောက်အမျိုးအစားစုံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ လဘက်ရည်တွေက ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်ပြီး လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်စားဖြစ်တဲ့ High Tea Menu ထဲက Gourmande Set ကလည်း ဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်များတယ်။ Gourmande Set က တစ် Set ကို၃၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ၂ ယောက်လောက်စားလို့ရပါတယ်။
ဒီဆိုင်မှာ TEA နဲ့ ကော်ဖီအမျိုးမျိုးအပြင် နိုင်ငံတကာက ဝိုင်အမျိုးမျိုးလည်းရပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ချီလီ၊ မြန်မာစတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးက ဝိုင်အမျိုးအစားအစုံလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Tea Salon ကို လူသိများစေတဲ့နောက်တစ်ခုက ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာ လှလှအပြင်အဆင်လှလှလေးတွေရှိခြင်းကြောင့်ပါ။ ဒီဆိုင်က လူသိများပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အထူးတလည်ရေးပြနေဖို့တော့ မလိုတော့ပါဘူး။ မရောက်ဖူးသေးရင်တော့ သွားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်ကောင်းလေးတစ်ဆိုင်လို့ လမ်းညွှန်ချင်ပါတယ်။
Saya San Road, Bahan Township,Yangon.
Phone : 09 765 400892
ဒူးရင်းသီးခရေဇီဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်ကိုသွားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ တကယ်ကိုအရသာကောင်းမွန်တဲ့ ဒူးရင်းစီးရီး တွေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ဒူးရင်းခရေဇီတွေတော်တော်များများလည်းသိကြပြီး မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် လမ်းညွှန်ပေးချင်တဲ့ဆိုင်ကတော့ အလုံက Paradise Bakery ပါ။
စားဖူးတဲ့သူတော်တော်များများဆီက Good recommendation ရထားတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါ ဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်ဆိုင်ကိုရောက်ဖြစ်တုန်း စားခဲ့တဲ့ ဒူးရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ Durian Lava ၊ Durian Soup ၊ Grilled Durian ဆိုပြီး ပုံစံမတူတဲ့ ဒူးရင်းသီးမုန့် သုံးခုစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရသာက အီဆိမ့်နေပြီး စားလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တခြားနိုင်ငံတွေမှာအစားများကြတဲ့ Banoffee Crumble ပါ။ Caramel Sauce နွေးနွေးလေးနဲ့ အချိုအဆိမ့်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝသဘောကျမယ့်ဟာပါ။
ဆိုင်မှာ cake, coffee, cold drink, food menu အစုံလင်ရှိပြီး တခြားစားသောက်စရာတွေ လည်းရှိပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကို လူသိများတာကတော့ ဒူးရင်းကြောင့်ပါ။ ဘာတွေရလဲ၊ ဘယ်လိုဒူးရင်းတွေရှိလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
No(161), corner of lower Kyeemyindine road and Mar Ga street, Ahlone Township, Yangon.
Phone : 09 772 797821
, Article, Chinese, Coffee, Warmae Review
မြေနီကုန်းက အစားအသောက်စုံလင်တဲ့ ဆိုင်ကောင်းလေးတစ်ဆိုင်
အစားအသောက်ဆိုင်တွေပေါတဲ့ မြေနီကုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်နေရာထဲနဲ့ အစားအသောက်ကောင်းကောင်း စုံစုံလင်လင်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြစံပါယ် ကိုသွားကြည့်ဖို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။
ဆိုင်မှာ မြန်မာအစားအစာ၊ တရုတ်အစားအစာနဲ့ ကော်ဖီ၊ ကိတ်မျိုးစုံရတာကြောင့် တစ်နေရာထဲနဲ့စားချင်တာစားလို့ရတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်ရောက်သွားရင်း စားဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကတော့ ကြေးအိုးဆီချက်၊ လဘက်ထမင်း၊ ဖာလူဒါနဲ့ လဘက်ရည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးအိုးဆီချက်အရသာက စားလို့အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး သာမာန်လဘက်ရည်ဆိုင်က ကြေးအိုးထက်တော့ လုံးဝသာပါတယ်။ ကြေးအိုးသီးသန့်ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တွေလောက်တော့ ထူးကဲတဲ့အရသာတော့ မရှိပါဘူး။ တစ်ပွဲကို ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ဈေးနဲ့ အရသာတန်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ကျန်တဲ့ လဘက်ထမင်းနဲ့ ဖာလူဒါတွေလည်းစားရအဆင်ပြေပြီး ဆိုင်မှာ ရွေးချယ်စရာ အစားအသောက်တော်တော်များတာကြောင့် အဝစားချင်သူအတွက်ရော အချိုတည်းချင်တဲ့သူအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကို သဘောကျမိတဲ့အချက်ထဲမှာ ဆိုင်နေရာကျယ်ဝန်းတာလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်ဆိုင်တွေပေါတဲ့ မြေနီကုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်နေရာထဲနဲ့ အစားအသောက်ကောင်းကောင်း စုံစုံလင်လင်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြစံပါယ် ကိုသွားကြည့်ဖို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။
ကျန်တဲ့ လဘက်ထမင်းနဲ့ ဖာလူဒါတွေလည်းစားရအဆင်ပြေပြီး ဆိုင်မှာ ရွေးချယ်စရာ အစားအသောက်တော်တော်များတာကြောင့် အဝစားချင်သူအတွက်ရော အချိုတည်းချင်တဲ့သူအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကို သဘောကျမိတဲ့အချက်ထဲမှာ ဆိုင်နေရာကျယ်ဝန်းတာလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
No.71, Pansondan Street , Kyauktada Tsp , Yangon.
Phone : + 01 249 875
, Coffee, Thai, Warmae Review
ၾကည့္ျမင္တိုင္က ထိုင္းအစားအေသာက္ေကာင္းတဲ့ ဆိုင္တစ္ဆိုင္အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုပါတယ္။
ဆိုင္နာမည္က Bangkok Cafe ျဖစ္ၿပီး Cafe လိုင္းတစ္ခုတင္မဟုတ္ပဲ အရသာရွိတဲ့ ထိုင္းအစားအေသာက္ အေတာ္ေလးစံုလင္တဲ့ဆိုင္တစ္ခုပါ။ ဒီတစ္ေခါက္ ေရာက္တုန္း စားျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြကေတာ့
ၾကက္သားထိုင္းဟင္း (Curry အစိမ္း) – အုန္းႏို႔နဲ႔ ခ်က္ထားတဲ့ ထိုင္းစတိုင္ ၾကက္သားဟင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရသာ အီဆိမ့္ၿပီး စားရတာ ေလးေလးပင္ပင္ရွိတယ္။ အစပ္အရသာေပါ့ၿပီး ထိုင္းစာနဲ႔ မစိမ္းတဲ့သူေတြအတြက္ တကယ့္ထိုင္းႏုိင္ငံမွာစားရတဲ့ ထိုင္းအရသာ စစ္စစ္ကို ရႏုိင္မယ့္ ဟင္းလ်ာတစ္ခုပါ။ Admin အျမင္ေျပာရရင္ အရသာေကာင္းၿပီး ၾကက္သားနည္းတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။ တစ္ပြဲကို ၆၀၀၀ က်ပ္ပါ။
Thai Style Iced Coffee ကေတာ့ ထိုင္း Tea ေတြပံုစံအတိုင္း ေသာက္လို႔ေကာင္းၿပီး အခ်ိဳတည္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ သေဘာက်မိတာက ထုိင္းစတိုင္ ေကြ႕သယိုပါပဲ။ ေကြ႕သယိုအရသာေကာင္းေကာင္းစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဒီဆိုင္ကို မျဖစ္မေနသြားၾကည့္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေကာ္ဖီနဲ႔ မုန္႔အစံုလည္းရၿပီး စားေသာက္စရာေရြးခ်ယ္ဖို႔ အေတာ္ေလးစံုလင္ပါတယ္။ ဆိုင္အေနအထားက က်ယ္၀န္းၿပီး ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္က ညျဖစ္တာေၾကာင့္ လူလည္းရွင္းတယ္။ ကားပါကင္က်ယ္တာကလည္း ဒီဆိုင္ကိုသေဘာက်မိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ၾကက္သားထိုင္းဟင္း (Curry အစိမ္း)
569 Lower Kyimyindine Road, near home street, next to Shwe Gon Thu condo
Phone : 09 45440 4800